integrated circuits (ICS),101 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
capacitors,14 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
discrete Semiconductor ထုတ်ကုန်များ,26 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
sensors, Transducers,62 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
connectors, Interconnection,147 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
resistors,7 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
switches,24 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
power supply - ဘုတ်အဖွဲ့တောင်မှာ,4 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
တီဗီ - Thyristors
PTC Resettable ဖျူး
တိုက်နယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး,17 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
inductors, coil, သီး,5 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
optoelectronics,38 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
ပရိသတ်များ - ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဝါသနာရှင်ကြိုးများ
အပူ - Thermoelectric, Peltier မော်ဂျူးများ
အပူ - Thermoelectric, Peltier စညျးဝေးပှဲ
အပူ - အရည်အအေးခံခြင်း
ပရိသတ်များ - Finger စောင့်, စိစစ်မှုများ & amp; အင
ပရိသတ်များ - ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ပရိသတ်တွေ, Thermal စီမံခန့်ခွဲမှု,12 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
Tools များ,35 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
crystals, လှို, ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု,8 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
cable ကိုစညျးဝေးပှဲ,22 categories အမျိုးအစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
100% နယူး & မူရင်း - မူရင်းအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများ
One-Stop စျေးဝယ်ခြင်း - အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းအများစုသည် One-Stop Supply Chain ဖြစ်သည်
အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် - လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုနှင့်အမြန်ပေးပို့ခြင်း
အကြီးစားစတော့ရှယ်ယာစာရင်း - ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့်ခေတ်ကုန်သွားသောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
Xilinx, Altera, Microsemi, Microchip, Lattice, Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Maxim Integrated, Cypress, Fairchild, Semiconductor ON, Zilog, Intel, Honeywell, Panasonic, Broadcom, Omron, Sharp, KEMET, AVX, TE Connectivity၊ နှင့်နောက်ထပ် ...
Integrated Circuits (ICs): PMIC၊ Memory, Logic, Linear, Interface, Embedded FPGAs, CPLDs, Microprocessor များ, Microcontroller များ, Resistors, Capacitors, Switches, Sensors, Transducers, RF / IF နှင့် RFID, Semiconductor Modules, Relays နှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
Micro-Semiconductor.com သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဓိက OEMs များနှင့်ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်သူများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိရောက်မှုရှိစေသောနည်းလမ်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော၊ အသုံးမ ၀ င်သော၊ ဘ ၀ ၏အဆုံး၊ ခွဲဝေချထားပေးထားသောအချိန်ကြာမြင့်စွာသောကိရိယာများကိုရှာဖွေရန်အထူးပြုသည်။
RF / IF နှင့် RFID
L6364Q Dual-Channel Transceiver IC STMicroelectronics ၏ transceiver IC သည် microcontro...
CC3230S / CC3230SF SimpleLink ™Arm®Cortex®-M4 Wi-Fi® MCUs
CC3230S / CC3230SF SimpleLink ™Arm®Cortex®-M4 Wi-Fi® MCUs Texas Instruments ၏ MCU မ...
PTFE နှင့် Polypro ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသောနည်းလမ်းများ
PTFE နှင့် Polypro ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသောနည်းလမ်း...
CH101 Long-Range အာရုံခံ
CH101 Long-Range အာရုံခံ InvenSense ၏အလွန်နိမ့်သောပါဝါဖြင့်...
PTFE စီတန်းအထူးသိကောင်းစရာများ Jensen ၏ PTFE စီတန်းထား...
ADL6012 Broadband စာအိတ်ရှာဖွေစက်
ADL6012 Broadband စာအိတ်ရှာဖွေစက် Analog Devices များ၏ ADL6012 broadba...
MAX31889 ± 0.25 ° C တိကျသော I2C အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ Maxim...
Rounded Edges များဖြင့် PU Series IP68 / NEMA 6P ပလပ်စတစ်အိတ်ကပ်
Rounded Edges များဖြင့် PU Series IP68 / NEMA 6P ပလပ်စတစ်အိတ်ကပ် B...
PW စီးရီး UL94-5VA မြင့်မားသောလောင်ကျွမ်းနိုင်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ABS ပူးတွဲချက်
PW စီးရီး UL94-5VA မြင့်မားသောလောင်ကျွမ်းနိုင်သောအဆ...
MW 67 စီးရီးမိုက်ခရိုဖုန်းစည်းဝေးပွဲများ
MW 67 စီးရီးမိုက်ခရိုဖုန်းစည်းဝေးပွဲများ DB Unlimited ...
120 W ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Adaptor
120 W ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Adaptor ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သွားဆ...
အကြီးစားစက်မှု Electrolytic က Capacitors
အကြီးစားစက်မှု Electrolytic က Capacitors KEMET ၏လေးလံသောစက်မှ...
MP8774H ထပ်တူပြုခြင်းအဆင့် -Down Converter
MP8774H ထပ်တူပြုခြင်းအဆင့် -Down Converter MPS ၏ MP8774H တွင်စဉ်...
19 "ထိန်သိမ်းများအတွက် FDX20 Splice Boxes
19 "ထိန်သိမ်းများအတွက် FDX20 Splice Boxes Phoenix Contact ၏ FDX20 စီ...
မော်ဒယ် PEC11H စီးရီး Rotary Encoders
မော်ဒယ် PEC11H စီးရီး Rotary Encoders Bourns 'encoders များသည်ကြမ်...
i.MX 8M Mini / Nano System-On-Modules (SoMs) Beacon EmbeddedWorks ၏ကြိုးမဲ့ SoM ...
SDK Feed-through Terminal လုပ်ကွက်များ
SDK Feed-through Terminal လုပ်ကွက်များ Conta-Clip ၏ SDK feed-through terminal...
ကြိုးမဲ့ပါဝါ Tools များ Semiconductor ၏ power semiconductors များကိ...
MaxGain® Ultra- အနိမျ့ - အရှုံး Coaxial Cable ကိုအစည်းအဝေးများ
MaxGain® Ultra- အနိမျ့ - အရှုံး Coaxial Cable ကိုအစည်းအဝေးမျာ...
စွမ်းအင်ရိတ်သိမ်း / အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင် Electrolytic Capacitors
စွမ်းအင်ရိတ်သိမ်း / အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင် Elec...
BGX220P ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်Bluetooth® module များ
BGX220P ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်Bluetooth® module များ ဆီလီကွန်...
TEA2208T Active Bridge Rectifier Controller NXP သည်နောက်မျိုးဆက်သစ် Dio...
STM32H7 Value Line 32-Bit မြင့်စွမ်းဆောင်ရည် MCU STMicroelectronics ၏တ...
MicroPak Automotive Q100 Nexperia ၏မော်တော်ကားအရည်အချင်းပြည့်မ...
MASTERGAN1 စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆဝက်ခြံတံတား STMicroelectronics ၏...
STGAP2HS galvanically4တစ် ဦး ကတစ်ခုတည်းဂိတ်ယာဉ်မောင်း
STGAP2HS galvanically4တစ် ဦး ကတစ်ခုတည်းဂိတ်ယာဉ်မောင်း STMic...
Integrated DC / DC Converter ဖြင့် AMC3301 တိကျသောအားဖြည့်သီးခြားထားသော Amp
Integrated DC / DC Converter ဖြင့် AMC3301 တိကျသောအားဖြည့်သီးခြာ...
ADM3058E / ADM2761E / ADM2763E Transceivers Analog Devices များ၏ ADM3058E, ADM2761E ...
microSplatch® uSP410 Chip Antennas Linx Technologies ၏ uSP410 ဒီဇိုင်းသည်အန...
ဖိုင်ဘာ Optic Cable ကို Prep Kit
ဖိုင်ဘာ Optic Cable ကို Prep Kit Jonard Tools ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှ...
ISM / DSRC ပြင်ပအင်တင်နာများ
ISM / DSRC ပြင်ပအင်တင်နာများ Molex ၏ပြင်ပအင်တင်နာများက...
ဘက်ထရီစွမ်းအားသုံးမော်တာယာဉ်မောင်း TRINAMIC ၏ motor dri...
အပူချိန်မြင့်မားသောပြန်လည်နေရာချထားသည့်ဖျူးများ - 0ZTx စီးရီး
STM32H735G-DK Discovery Kit STMicroelectronics ၏ပြီးပြည့်စုံသောသရုပ်...
ကြိုးမဲ့အားသွင်းဂီယာကွိုင် - WCC စီးရီး
ကြိုးမဲ့အားသွင်းဂီယာကွိုင် - WCC စီးရီး Signal Transformer...
Cold Atom Space Payload Accelerometer သည်ရာသီဥတုပုံစံကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်
ပြင်သစ်သည်မိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ်ကိုအာရုံစိုက်သောကြောင့် Mentor သည် Nano 2022 သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်
အာကာသအမှိုက်များကိုခြေရာခံရန် Clearspace-1 မစ်ရှင်
Vox Power သည်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုကိုင်ဆောင်ထားသည်